Warbixin: David Alaba Oo Qaadanaya Mushahar Lamid Ah Midka Sergio Ramos Ee Real Madrid
HomeWararka Ciyaaraha MaantaWarbixin: David Alaba oo qaadanaya mushahar lamid ah Midka Sergio Ramos ee Real Madrid
May 3, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Horyaalka Germalka, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
David Alaba ayaa lagu soo waramayaa inuu qaadan doono mushahar la mid ah kabtankii mudada dheer soo shaqeynayay ee Sergio Ramos marka uu xagaaganku biirayo Real Madrid .
Daafaca boosaska badan ee Alaba ayaa horaantii xilli ciyaareedkan ku dhawaaqay inuu soo gabagabeynayo 13-sano oo xiriir ah oo uu ku sugnaa Bayern Munich dhamaadka xilli ciyaareedkaan.
Madrid ayaa ah kooxda ugu cadcad inay la soo wareegto wakiilka xorta ah, iyadoo la sheegayo inuu heshiis horey u dhex maray labada dhinac.
Sida laga soo xigtay khabiirka suuqa kala iibsiga ee Fabrizio Romano , Alaba waxaa la siin doonaa qiyaastii € 12m (£ 10.44m) xilli ciyaareedkiiba canshuurta ka dib, taasoo si wax ku ool ah u dhiganta mushaarka Ramos.
Taas ayaa ka dhigeysa ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Austria inuu noqdo ciyaaryahanka seddexaad ee ugu mushaharka badan Madrid, waxaana ka horeeya kaliya Eden Hazard iyo Gareth Bale , kuwaasoo oo qaata 15m (£ 13.1m).
Mustaqbalka Ramos ayaan wali la hubin inuu kusii jeedo suuqa kala iibsiga, inkastoo uusan weli si rasmi ah heshiis ula gaarin Los Blancos isla markaana uu xor u yahay inuu la hadlo kooxaha shisheeye.